बैङ्कहरु डुबाउनैपर्छ | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो बैङ्कहरु डुबाउनैपर्छ
नेपालमा एक/दुई व्यावसायिक गृहबाहेक क्षेत्रगत हिसाबले यो दशकमा सफल भएको एउटै क्षेत्र भनेको बैङ्किङ नै हो । त्यसैले अहिले बैङ्किङ क्षेत्र सबैको तारो बनेको छ । हुन पनि हो, देशमा अरु क्षेत्रले चाहिँ राम्रो गर्न नसक्ने, बैङ्कले मात्र गर्ने ? उसले मात्र त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ? उसले मात्र अरु क्षेत्रले भन्दा कर्मचारीलाई तलब, सुविधा आदि बढी दिनुपर्ने ? अरु क्षेत्रले चाँहि जे गरे पनि हुने, बैङ्कचाहिँ कत्रो न ‘प्रोफेशनल’ बन्नुपर्ने ?
धन्न उचित समयमा राष्ट्र बैङ्कले सही नेतृत्व पाएछ । अब सरोकारवाला मन्त्रालयहरुमा पनि राष्ट्र बैङ्ककै कार्यशैली नक्कल गर्ने मन्त्री र सचिव पाउने हो भने बैङ्कहरुले थाहा पाउनेछन् – राज्यको शक्ति भनेको कस्तो हुन्छ भनेर । बैङ्कका सीईओलगायत कर्मचारीले देशका सचिव, केन्द्रीय बैङ्कका कर्मचारीको तुलनामा बीसौं गुणा बेसी तलब, भत्ता खान पाइन्छ ? वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाएरै त्यत्रो तलबै बजाउने ? यो त अति भो ?खानु नै छ भने बरु मन्त्रीहरुले जस्तो घूसै खानु नि ! घूस खाएर कसैले केही गर्ने होइन ! हजारौं नेता, कर्मचारीलगायतले घूस खाएको खायै छन् । मन्त्री भएर छोडेको एक दशकपछि न एक मन्त्री घूस खाएको कार्बाहीमा परेका हुन् ? बाँकी घुस्याहाहरु त देशका सम्मानित नागरिक भएर हिँडिनै रहेका छन् नि ! उनीहरुलाई कसले के गर्छ ?
त्यस्तै अरु क्षेत्रले कर छले हुन्छ । बैङ्कचाँहि चाहिनेभन्दा बढी पारदर्शी हुन पाइन्छ ? पारदर्शी नहुँदा नेपाल विकास बैङ्कबाहेक अहिलेसम्म कुनै बैङ्क डुबेका छैनन् । नेपाल विकास बैङ्क डुबेको पनि त्यसको नामको कारणले मात्र हो । पारदर्शी नभएकाले होइन । नेपालको विकास गर्ने भन्ने आशय बैङ्कको नाममै रहेकाले बैङ्कमा समस्या आएको हो ।भनाइ नै छ कसैले नेपालको हित गर्ने कुरा गर्यो भने ऊ समस्यामा पर्छ रे । भीमसेन थापाले नेपालको हित गर्न खोजेका कारण उनी जेल परेको भनेर उनकी श्रीमतीले नै भनेकी थिइन् रे ! अस्ति जेल जान लाग्दा चिरञ्जीवी वाग्लेकी कान्छी श्रीमतीले पनि त्यसै भनेकी थिइन् रे ! श्रीमतीले नै भनेपछि कसरी नपत्याउनु ( त्यसैले धेरै पारदर्शी भएर धेरै राष्ट्रवादी भइरहनु आवश्यक छैन । आफू पारदर्शी हुँदा अरु क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्दैन ? गुण्डाहरुको बिगबिगी बढेका बेलामा पारदर्शी हुनु भनेको धेरै जोखिमयुक्त कुरा हो । छोरीले पारदर्शी लुगा लगाएर बजार जान खोजी भने बाबुआमाले रोक्नुपर्ने बेला छ । त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कले पनि चन्दा माग्न आउने दलका कार्यकर्ता, लुटेरा आदिबाट जोगाउन अभिभावकको नाताले बैङ्कहरुलाई अनेक किसिमका सर्कुलर जारी गर्दै रोक्दै गरिरहनुपर्छ । यस्ता गहन कुरा नबुझी मिडियामा गएर बाफियाको संशोधन विधेयकलाई माफियाजस्तो ठानेर विरोध गरिहिँड्ने ? विरोध नै गर्ने भए राष्ट्र बैङ्कअगाडि धर्ना, जुलुस, ढुङ्गामुढा गर्न सक्नुपर्छ । पैसा खेलाउने मान्छेले बुद्धि, तर्कका कुरा गर्दै हिँड्न सुहाउँछ ?
बैङ्कहरुले अबको युग भनेको स्वाधीन मिश्रति अर्थतन्त्रको नभई खुलाबजार अर्थतन्त्रको हो भन्ने शायद बुझेका छैनन् । खुला बजार अर्थतन्त्र सबै कुरा बजारलाई छोड्ने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । अब सबै कुरा बजारलाई छोड्ने हो भने राष्ट्र बैङ्कको हाकिम भएको, अर्थ सचिव भएको, अर्थमन्त्री भएको, नेता भएको के अर्थ ? जुन देशमा आफ्ना यति धेरै हाकिमहरु आफूले गरेका हरेक कामका (सही कामको मात्र, गलत कामको त कसलाई के मतलब हुन्छ र ?) लागि यति धेरै चिन्तित भएर बसिरहेका छन् त्यसमा बैङ्कहरुले किन टाउको दुखाइरहेको हो बुझिनसक्नुछ ।
त्यसैले संविधान मस्यौदा तयार गर्ने सभासद्हरु, अर्थमन्त्री, सचिवलगायत राष्ट्र बैङ्कको नेपालका बैङ्कहरुलाई ठीक पार्ने हरेक कदमको यो पङ्क्तिकार पनि खुला हृदयले स्वागत गर्दछ । बैङ्कहरुलाई डुबाउनैपर्छ । कागहरुको बथानमा एउटा बकुल्ला सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन । बकुल्लालाई कागहरुको भीडबाट समयमै लखेट्नु नै उचित हुन्छ ।